DHAGEYSO Saraakiisha amaanka gobolka Hiiraan oo awaamiir ka soo saaray dadka hubka sharci darada ah wata. – The Voice of Northeastern Kenya
DHAGEYSO Saraakiisha amaanka gobolka Hiiraan oo awaamiir ka soo saaray dadka hubka sharci darada ah wata.
Taliska ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed qaybta ku sugan magaalada Beledweyne gobolka Hiiraan ayaa amara culus ku soo rogay dadka hubka sharci darada wata.
Taliyaha ciidamada xooga qaybta gobolka Hiiraan Isaaq Cali Cabdulle ayaa warbaahinta kula hadlayay magaalada Beledweyn ayaa inay amaro culus ku soo rogeen dadka hubka sahrci darada ah ku dhex wata magaalada Beledweyne iyo guud ahaanba gobolka Hiiraan.
Taliyaha ayaa xusay inaan marnaba la ogolaan doonin inay cid aan dowlada ka tirsanayn ay magaalada dhexdeeda hubku wadato,qofkii hub haysta ayuu u sheegay inay guryahooda ku haystaan hubkooda oo aysan magaalada ula soo bixin si amniga gobolka uusan khalkhal ugu imaan.
Taliyaha ayaaa sheegay in amarkaas cidii aan u hogaamsamin ciidamada la faray inay hubka ka qaadaan qofkii isku daya inuu dagaalamana ciidamada lagu amray inay toogtaan.
Amarka ka soo baxay saraakiisha amaanka ee gobolka Hiiraan ayaaa imaanaya ayadoo maalmihii la soo dhaafay ay magaalada Beledweyne ka taagnayd xiisada ka dhalatay askari ciidamada dowlada Katirsan oo dil u gaystay nin dhalinyaro ah oo ka mid ahaa wadayaasha mootooyinka Bajaajta ee ka howlgala magaaladaasi.
← UK Prime Minister Theresa May arrives in Nairobi for state visit
Iran oo wacad ku martay in ay ka baxayso heshiiska nukliyeerka →